कसरी, एक व्यक्ति को ठेगाना पत्ता लगाउन आफ्नो कम्प्युटरमा आईपी थाह?
कम्प्युटर, सूचना प्रविधि
धेरै मानिसहरू सोध्छन्: "तपाईं कसरी व्यक्तिको ठेगाना थाहा भएको पहिचान नम्बर मार्फत नेटवर्कमा आफ्नो कम्प्युटर को?" वा "तपाईं कसरी आईपी मा व्यक्ति को ठेगाना थाहा छ?" र किन यो सबै आवश्यक छ? वास्तवमा, कसैले सकिनँ गम्भीर यस्तो विषय रुचि छैन शङ्कास्पद उद्देश्यका लागि हो। स्पामरहरूको आक्रमण एक साइट मानौं, तर यो पनि उही स्पैमर एक भाइरल लिंक समावेश आफ्नो साइट मा एक टिप्पणी ... त्यसपछि मामला बायाँ र आपराधिक कार्यवाही को गन्ध गरे कि हुन सक्छ। खैर, हामीलाई यस्तो लोकप्रिय विषयमा बुझ्न प्रयास गरौं।
कसरी आफ्नो आईपी पीसी बुझेर एक व्यक्ति को ठेगाना फेला पार्न पहिले नै ठेगाना परिभाषित कसरी पत्ता बुझ्न।
आईपी-ठेगाना - को मा एक अद्वितीय कोड इन्टरनेट। उहाँले प्रत्येक कम्प्युटर प्रशासक नियुक्त गरिएको छ। तपाईं जब इन्टरनेट निर्दिष्ट ठेगाना तपाईंको ISP द्वारा नियुक्त बाहिर निस्कन। प्रत्येक कम्प्युटर आफ्नै आईपी संग नेटवर्क जडान, अरु देखि अलग। तर, यो सधैं हुँदैन। उदाहरणका लागि, सर्भर बाह्य छ भने पहिचान नम्बर र इन्टरनेट जोडिएको छ, सर्भर मार्फत सञ्जालमा कि जाने कम्प्युटर को सबै नै आईपी हुनेछ।
यो शहर, जिल्ला, सडक, फोन नम्बर थाहा, र IP को घर ठेगाना पत्ता लगाउन सम्भव छ? छैन भन्दा बढी सम्भावना। प्रयोगकर्ता एक प्रोक्सी सर्भर प्रयोग गर्दैन, यदि र एक तथ्याङ्क नेटवर्क ठेगाना को होल्डरलाई छ, कार्य धेरै सजिलो छ।
नेटवर्क मा कि यस्तै सेवाहरू प्रदान धेरै साइटहरु छन्।
यहाँ तिनीहरूलाई केही छन्।
"2ip.ru" - आईपी आफ्नै कम्प्युटर, साथै यसको नाम, तपाईंको शहर र ISP पहिचान गर्न मद्दत गर्छ कि एक साइट। साथै, साइट अतिरिक्त सेवाहरू विभिन्न प्रदान गर्दछ। उदाहरणका लागि, ई-मेल को अस्तित्व र स्पाम डेटाबेस मा उपलब्धता आईपी जाँच।
"Iplogger.ru" - कसरी कम्प्युटर लुकेको तरिका को आईपीठेगानाछैन मा व्यक्ति को ठेगाना फेला पार्न बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ साइट। यो गर्न, तपाईं साइटमा दर्ता चयन "iplogger उत्पन्न" र कोड प्रतिलिपि आवश्यक क्लिपबोर्डमा। (- LJ लागि, वा "[IMG" - फोरम "
"Speed-tester.info/check_another_ip.php" - पनि राम्रो सेवा हो। कम्प्युटर व्यक्ति एक विशेष उत्पन्न लिंक पाउनुहुनेछ IP रुचि राख्नुहुन्छ। एक प्रयोगकर्ता तोकिएको ठेगाना प्रवेश भएपछि, तपाईंले यसको आईपी उपलब्ध हुनेछ।
अन्य कुराहरु, यो मन मा सार्ने गर्नुपर्छ जब तपाईं इन्टरनेटमा जडान गर्न एक मोडेम प्रयोग, कम्प्युटर तोकिएको छ कि एक गतिशील आईपी-ठेगाना अन्तिम अंक परिवर्तन देखि।
एक व्यक्ति को ठेगाना कसरी पाउन? सायद माथिको विधिहरू सबै तपाईंलाई मदत गर्न सक्नुहुन्छ। के शहर के तपाईं व्यक्ति चासो बाँच्न मा पत्ता र सेवा प्रदायकको मद्दत एक व्यक्ति अनलाइन, bravely, जान्छ आफ्नो भाग मा ठगी को मामला मा सम्पर्क कानून प्रवर्तन। सामान्यतया यो IP को परिभाषा छ आफ्नो मुख्य समस्या छ, राम्रो, जानकारी बाँकी, तिनीहरूले बाहिर गए र सजिलै ल्याए।
को "अस्पष्ट" के हो र कसरी प्रयोग गर्ने?
Terabyte: यो कति छ? कति terabayte 1 गिगाबाइट?
सफ्टवेयर डाटा सुरक्षा - कार्य क्षेत्र नेटवर्क को आधार
ब्याक अप डाटा - प्रमुख सुरक्षा जानकारी
सूचना प्रणाली: उदाहरण। लेखा जानकारी सिस्टम
कारोबार - यो के हो? लेनदेन डेटाबेस
अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सहनशीलता लागि - समानता को पदोन्नति
आलु "स्कारलेट": विविधता को वर्णन, माली समीक्षाएँ
क्यारेबियन विश्व Mahdia4* (Mahdia, टुनिशिया): होटल विवरण र फोटो
रूस मा जापानी कार लागि स्पेयर पार्ट्स किन्न
Rosemary: उपयोगी गुण "समुद्र शीत"
किन बच्चाहरु डाउन सिन्ड्रोम संग जन्म छन्? प्रश्न गर्न सही उत्तर कुनै छ
बास्केटबल क्लब "ओर्लान्डो जादू": क्लब, प्रतीक, पौराणिक खेलाडीहरू को इतिहास
आलु र केले बनाइएका आलु चिप्स कसरी बनाउने
रुडोल्फ डीजल - आन्तरिक दहन इन्जिन आविष्कारक
हर्मोनल घन्टी "नोवा रिङ": प्रयोगको लागि निर्देशन
"Tsipromed" (कान घटेको) - प्रयोगको लागि सिफारिस